वित्तीय साक्षरता अपरिहार्य « Sahakari Nepal
वित्तीय साक्षरता अपरिहार्य
प्रकाशित मिति : 20 April, 2018 12:17 pm
आफ्नो जिवन समृद्धिको लागि वा जिवन सफल बनाउनको लागि आफु सँग भएको ज्ञान र सिपको अधिकतम प्रयोग गरी वित्तीय स्रोतहरुको अर्थात् आफु सँग भएको नगद तथा सामान हरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु अर्थात् भविश्यमा पर्न सक्ने आवश्यकताहरु पुरा गर्नको लागि जोगाउन सफल हुने सम्वन्धी ज्ञान नै वित्तीय साक्षरता हो। सामान्य तया वित्तीय साक्षरता भनेको पैसा कसरी कमाउनु पर्छ ? कसरी खर्च गर्नु पर्छ ? पैसा कसरी बचत गर्नु पर्छ ? कसरी आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्नु पर्छ अर्थात् आम्दानी र खर्च लाई कसरी लेखेर राख्नु पर्छ ? कुन कुन क्षेत्रमा लगानि गर्नु पर्छ ? पैसाले कसरी काम गर्छ ? आदी कुराहरु बुझ्नु नै वित्तीय साक्षरता सम्वन्धी ज्ञान हो।
मिलिजुली वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका शेयर सदस्य तथा सम्भावित शेयर सदस्यहरुले आफ्नो जिवन सहज रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि जान्नुपर्ने कुराहरु ः
१. आफ्नो दैनिक आवश्यकता पुरागर्न दैनिक रुपमा मेरो र मेरो परिवारको कति आम्दानी हुन्छ र त्यस मध्ये कति वचत गरी बाँकी रहेको रकम मध्ये कती कती कुन कुन शिर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने कुरा,
२. पैसाको सही सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा,
३. कमाएको रकम मध्ये वाट पहिला वचत गर्ने र बाँकी बसेको रकम वाट खर्च गर्नु पर्छ भन्ने कुरा,
४. मानवको जन्म भएपछि खाना, लुगा, घर, शिक्षा, विवाह आदि कुरा को आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा,
५. विरामी परिन्छ, प्राकृतिक प्रकोप आई पर्न सक्छ, बृद्ध अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा,
६. जाँड, रक्सी, चुरोट, खैनि, सुर्ति, पराग खानु हुदैन, तिर्थयात्रामा धेरै खर्च गर्नु हुदैन, जुवा तास खेल्नु हुदैन, सौखिन सामाग्री प्रयोग गर्नु हुदैन, विवाह लगायतका सांस्कृतिक कार्यमा धेरै खर्च गर्नु हुदैन भन्ने कुरा,
७. आम्दानी बढाउने, भविश्यमा कसरी परिवार चलाउने भनी योजना वनाउने, नियमित वचत गर्ने, आवश्यकता भएमा मात्र ऋण लिने, सर्त बमोजीम ऋण तिर्ने ज्ञान सम्वन्धी कुरा,
८. आफ्नो परिवारले भविश्यमा कुन कुन शिर्षकमा कति कति खर्च गर्ने र सो खर्च गर्नको लागि कुन कुन शिर्षकमा आम्दानी गर्ने भन्ने कुरा,
९. आम्दानीको श्रोतहरुको बारेमा ज्ञान जस्तै ः
कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, नगदेवाली, साना उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, ज्याला वा पारिश्रमिक, नोकरी, बैदेशिक रोजगार आदी।
१०. खर्चका शिर्षकहरुको बारेमा ज्ञान जस्तै ः
खानेकुरा, लगाउने कपडा, बस्ने वास, शिक्षा खर्च, स्वास्थ्य उपचार खर्च, जन्म मृत्यूमा हुने खर्च, विवाह ब्रतवन्ध लगायत सामाजिक क्रियाकलापमा हुने खर्च, आपतकालीन अवस्थामा बेहोर्नुपर्ने खर्च, विलासिताका सामानमा हुने खर्च, भ्रमण तथा मनोरन्जनमा हुने खर्च आदी।
खर्चको व्यवस्थापन ः
हामीले खर्च गर्दा अत्यावश्यक खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ। विलासिता वा अनावश्यक खर्च कम गर्न सकेमा हाम्रो जिवनको आर्थिक पक्ष सफल हुन सक्दछ। मानव जिवनमा बेहोर्नुपर्ने खर्चलाई यसरी बुझ्न जरुरी छ ।
क) अत्यावश्यक खर्च ः मानव जिवन बाँच्नको लागि नगरी नहुने खर्च लाई अत्यावश्यक खर्चमा लिन सकिन्छ। यस अन्तर्गत गाँस, बास र कपास अन्तर्गत गर्नुपर्ने खर्चहरु पर्दछन्।
ख) आवश्यक खर्च ः मानव जिवनलाई केही सहज तरीकाले अगाडि वढाउनको लागि आवश्यक पर्ने खर्चशिर्षकहरु यस अन्तर्गत पर्दछन्। यसमा गाँस, बास, कपास अन्तर्गत पर्ने खर्च हरुमा स्तर बृद्धि गरी अलि मिठो खाने, राम्रो लगाउने, सामान्य मनोरन्जन गर्ने, सुविधाजनक तथा आरामदायि सामानको प्रयोग गर्ने जस्ता खर्चहरु पर्दछन्।
ग) अनावश्यक वा विलासिताका खर्च ः जिवन चलाउनको लागि आवश्यक नभएको तर मानिसले मोज मज्जा गर्नको लागि, विलासि जिवन विताउनको लागि खर्च गर्दछ यस्ता खर्चहरु अनावश्यक खर्च हुन्। जस्तै धुम्रपान, मध्यपान, मनोरन्जन, विलासिताका सामानको प्रयोग, अनावश्यक आडम्वर प्रदर्शन गर्ने खर्च, अरुको देखासेखीमा गरीने खर्च, तिर्थ यात्रामा अधिक खर्च, सामाजीक संस्कार पुरा गर्दा गरीने अधिक खर्च आदी।
मानिसको आम्दानी सिमित हुन्छ तर खर्च गर्नुपर्ने शिर्षकहरु अनगिन्ती हुन्छन्। त्यसैले हामीले खर्च गर्दा आम्दानीलाई ध्यान दिएनौ भने ऋणमा डुव्ने र तिर्न नसकेर बेईज्जत कमाउनु पर्ने, घर खेत वारी लिलाम हुने, मुद्धा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण हामीले आफ्नो मासिक आम्दानी र खर्चको हिसाव लेखेर राख्नु अनिवार्य छ। हामीले महिना भरीमा कुन कुन शिर्षकमा कति कती कमाई गर्दछौ र कुन कुन शिर्षकमा कति कति खर्च हुन्छ भनी लेखेर राख्ने र महिनाको अन्तीम दिन जम्मा आम्दानी कती ? जम्मा खर्च कती ? जम्मा आम्दानी बाट खर्च घटाउदा मासिक जोगिने रकम कति ? भयो भनेर हिसाव राख्नै पर्ने हुन्छ। यसो गरेमा मात्र हामी आफ्नो आम्दानी भित्र बाटमात्र खर्च गर्ने र आम्दानी बृद्धि गर्ने तर्फ लाग्दछौ।
कापीको पेजमा एकपट्टी मासिक आम्दानी र अर्कोपट्टी मासिक खर्चको शिर्षकलाई लेखेर राख्ने गर्नै पर्छ र मासिक जम्मा आम्दानी बाट जम्मा खर्च घटाई कति रकम जोगिएछ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले आज सम्म यसरी लेखेर राख्ने गरेको छैनौ भने सम्झनुहोस् हामीले आफ्नो जिन्दगिको आर्थिक पक्षलाई बेवास्ता गरेका रहेछौ। खर्च नियन्त्रण गरी आम्दानी बृद्धि गर्नको लागि पनि लेखेर राख्ने व्यवस्था गर्नै पर्दछ।
बचत नै मानव जिवन सम्पन्न बनाउने आधार ः
बचत के हो ?
वर्तमान आम्दानी बाट भविश्यको लागि भनेर छुट्टयाईएको रकम नै बचत हो । बचतले भविश्यलाई उज्यालो बनाउछ। थोरै आम्दानी छ भनेर आतिनु हुदैन यस्तो वेलामा बचत गर्न सक्नु भनेको त्याग हो। वर्तमान अवस्थाको त्यागले भविश्यलाई चिन्तामुक्त बनाउछ।
बचत किन आवश्यक छ ?
क) आम्दानी कम भएको वेलामा साहारा लीन,
ख) चाडपर्व मनाउन, सामाजिक परम्परा पुरा गर्न, तिर्थब्रत गर्न, यात्रा गर्न, मनोरन्जन गर्न,
ग) विरामी हुदा, बृद्धिअवस्थाको साहाराको लागि,
घ) सम्पत्ती जोड्न,
ङ) उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि,
च) बाल बच्चाको हेरचाहा गर्न, शिक्षा दिनको लागि,
बचत गर्ने तरिका ः
१) आफ्नो आम्दानी मध्ये केही रकम वचत गरेपछि मात्र खर्च गर्ने।
यसलाई सुत्रको रुपमा हेर्दा ः
खर्च = आम्दानी – बचत
२) आफ्नो आम्दानी वाट जतिसक्दो छिटो र धेरै बचत गर्ने।
३) आफ्नो आम्दानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत वचत गर्ने।
४) अनावश्यक खर्च शिर्षकको खर्च कटाएर बचत गर्ने।
५) आफु र आफ्नो परिवारलाई अतिआवश्यक सामानमात्र खरिद गर्ने र खाना पकाउदा खेर जाने गरी नपकाउने।
६) आफुले मिलिजुली वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा वचत गरेको रकम कति पुग्यो कम्तीमा वार्षिक एक पटक संस्थामा सोध्ने।
७) आफु नजिक र सहजै भेटिने स्थानमा नगद नराख्ने यदि आफु सँग नगद भएमा बचत जम्मा गरिहाल्ने।
८) आफ्नो मासिक आम्दानी भन्दा मासिक खर्च जहिले पनि कम गर्ने।
९) घरमा प्रयोग हुने सामानहरु खुद्रा खरिद गर्दा मह∙ो पर्न जान्छ त्यसैले नविग्रने सामान छ भने एकै पटक महिना भरीलाई पुग्ने गरी होलसेलमा खरिद गर्ने जसले गर्दा मुल्यमा केही कम पर्न आउँछ।
१०) फोन, विद्युत्, पानि सम्वन्धी खर्च कम गर्ने र मोवाईलमा अनावश्यक कुरा नगर्ने।
११) तोकेकै मितिमा आफुले लिएको ऋणको किस्ता र व्याज भुक्तानि गर्ने जसले गर्दा हर्जना तिर्ने रकम जोगिन्छ।
१२) धुम्रपान, मध्यपान, अनावश्यक वस्तु सेवन गर्ने बानी त्याग गर्ने र जुवा तास खेल्दै नखेल्ने।
१३) स्वोच्छ र सफा खानपान गर्ने, व्यायाम गर्ने जसले गर्दा रोग कम लाग्छ र औषधिउपचार खर्च कम गर्न सकिन्छ।
१४) मह∙ो बस्तुको प्रयोग नगर्ने सस्तो तर गुणस्तरीय बस्तुको प्रयोग गर्ने।
१५) बजार जाँदा पैसा नबोकी जाने जसले अनावश्यक वस्तु खरिदलाई रोक्दछ।
१६) आफ्नो र आफ्नो परिवारको जिवन यापन गर्नको लागि अत्यावश्यक वस्तु बाहेक अन्य वस्तु खरिद नगर्ने।
१७) अरुले विलासिताको सामान प्रयोग गरेको देख्दैमा आफ्नो मन नदुखाउने आफ्नो क्षमतालाई विश्लेषण गर्ने।
१८) मासिक वचत नियमित गर्ने र बृद्धि गर्दै लैजाने।
१९) चाडपर्व तथा अन्य सांस्कृतिक परम्परागत कार्यक्रममा कम खर्च गर्ने।
२०) भविश्यमा केही आपत पर्न सक्दछ भन्ने सोचेर मिलिजुली मा गई आकस्मिक बचत गर्ने।
२१) स्वास्थ्य, सम्पत्ती तथा अन्य विमा सेवामा सहभागि हुने।
२२) आफुलाई सुहाउदो वचत सेवा छनौट गर्ने।
२३) समय खेर नफाल्ने।
२४) कुनै काम नगरी खाली समय नविताउने।
२५) उत्पादनमुलक क्षेत्रमामात्र लगानि गर्ने
ऋण के हो ?
आफुलाई आवश्यक परेको रकम आफु सँग पर्याप्त नभएको अवस्थामा बाह्य पक्ष (व्यक्ति वा संस्था) बाट निश्चित सर्त बमोजीम व्याज सहीत अनिवार्य तिर्ने गरी ल्याईएको रकम नै ऋण हो । ऋण लगिसके पछि बोल कबोल अनुसार तिर्नु पर्ने हुन्छ र नतिरेमा कानुनले तिर्न वाध्य बनाउछ।
ऋण व्यवस्थापन गर्ने तरिका ः
१) भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम र मिति सहित सबै ऋणहरुको सूची तयार गर्ने ।
२) सबैभन्दा पहिले बढी व्याज लाग्ने ऋणको भुक्तानी गर्ने र त्येसपछि बाँकी ऋणहरु पनि क्रमश तिर्दै जाने ।
३) नियमित रुपमा ऋण तिर्ने रकम छुट्याउने ।
४) ऋण तिर्नको निम्ति रकम जुटाउनको लागि खर्च घटाउने र आम्दानी वढाउने उपायहरु खोजी गर्ने ।
५) आफुले तिर्न सक्ने मात्र ऋण लिने ।
६) आम्दानी मध्ये बाट पहिला ऋण तिर्नको लागि रकम छुट्टयाउने अनिमात्र खर्च गर्ने ।
७) ऋणको भाखा नाघ्न लागेमा आफुसँग भएको बस्तुहरु बिक्री गरेरै भएपनि किस्ता र व्याज बुझाउने।
८) व्यवसाय सुधारको उपायहरु खोज्ने।
९) धेरै संस्था बाट ऋण नलिने।
१०) योजना बिना ऋण नलिने।
११) जुन उदेश्यमा ऋण लिएको हो सोही शिर्षकमा मात्र प्रयोग गर्ने।
संस्थाले कार्यक्षेत्रभीत्र बसोवास गर्ने शेयर सदस्य तथा सम्भावित शेयर सदस्यहरुलाई सहकारी शिक्षा र वित्तीय साक्षरता तालीम दिनको लागि तपाई हरुको गाउँ गाउँमा तालीम कार्यक्रम लिएर आउँदैछ। यहाँहरुलाई पत्र वा फोन मार्फत जानकारी आउँनेछ। यो कार्यक्रम क्रमस सञ्चालन गर्दै लगिने छ। यहाँहरुलाई क्रमस बोलाउदै तालीममा सहभागि गराईनेछ। यहाँहरुले उक्त तालीम कार्यक्रममा सहभागि भई आफ्नो क्षमता विकास गरी मिलिजुली वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. चरिकोट, दोलखा लाई सहयोग गरिदिनहुन अनुरोध गरिन्छ।